Mhlawumbe kunzima ukuthola umuntu ongathandi ama-strawberries. Le berry ithandwa yizingane kanye nabantu abadala. Strawberry Crown inomnandi kakhulu, iphunga elimnandi. Kuwusizo empilweni futhi, okubaluleke kakhulu, kuyatholakala futhi kulula ukukhula. Amajikijolo anamakha angatholakala kuwo wonke unyaka. Ngesizathu esithile, abaningi bayabheka njengento engenangqondo. Lokhu akunjalo, ngokuphambene nalokho, kungakhula efasiteleni lakho, egaraji, endaweni yokushisa ngisho nasebusika.
Strawberry Crown: Incazelo ehlukile
Abalimi abanolwazi bayazi ukuthi kunezinhlobonhlobo ezinhle ze-strawberries ezidalwa abalimi baseRussia. Ziyavumelana nezimo zethu futhi ziveza isivuno esihle. I-strawberry enhlobonhlobo Crown yafika kithi evela eYurophu. Lakhiwa ngabalimi beHolland ngo-1972. Yatholakala ngokuwela izinhlobo ze-Induka noTamella. Le sitrobheli enhle kakhulu yathola izinhliziyo zabalimi abaningi ngokushesha. Kuze kube yimanje, lokhu kungenye yezinhlobo ezindala kakhulu ze-dessert ezineminyaka ephakathi. Uphumelela ngokuphumelelayo endaweni ephakathi yaseRussia. I-Strawberry Crown imelene nesithwathwa. Enye yezinzuzo zayo ezingenakuphika - ukuphikiswa kwezidakamizwa zibe isikhumba se-powdery - isifo esijwayelekile kakhulu se-strawberries.
Amajikijolo anethenda, aphunga, ayenzi.
Usayizi - kusuka kumaphakathi kuya kwekhulu.
Umbala ungaba kusuka obomvu obomvu kuze kube mnyama. I-gloss ecacisiwe kahle ebusweni bamajikijolo.
Ngokwemigomo yokuvuthwa kwezithelo zezitshalo ze-strawberry Crown ibhekisela emaphakathi-zakuqala.
Kunezinselele ezithile zeSrowberry Crown. Ama-gardeners amazwana athi amajikijolo kunzima ukuhlukanisa isiqu, futhi agxile ukungazinzi ukubola. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile amaqabunga ama-strawberries alezi zinhlobonhlobo ahlaselwa yi-white spotting.
I-Strawberry Crown, isithombe osibona esihlokweni sethu, ikakhulukazi sidinga endaweni ephakathi yaseRussia, lapho nasezinyangeni zasehlobo ukushisa akusijabulisi isikhathi eside. Ngakho-ke, ikhono lalezi zinhlobonhlobo ukubekezelela amaqhwa lithandwa kakhulu ngabalimi. Futhi ukuphikiswa kwayo kwesifo esesabekayo, njenge-powdery isikhutha, kwenza kube ngcono nakakhulu kubalimi.
I-Ripen amajikijolo maphakathi noJuni, ezindaweni eziseningizimu, empeleni, ekuqaleni.
Ngokungangabazeki, i-strawberry Crown, incazelo engatholakala kuzo zonke iziqondiso zokulima, kulula kakhulu ukukhula ezindaweni zokugcina izithombo. Emhlabathini ovulekile, kungathinteka yizici eziningi ezingalungile. Kodwa, njengoba wazi, abalimi beqiniso abesabi ubunzima. Ukwazi imithetho eyisisekelo yokutshala nokunakekela lesi sitshalo, ungakwazi ukuthola imiphumela emihle kakhulu.
Okokuqala, kuyadingeka ukhethe isiqephu somhlaba lapho lesi sitshalo sizozizwa sikhululekile kakhulu. Izindawo ezifanele kakhulu kuyoba indawo lapho izitshalo noma okusanhlamvu kukhula khona , ngoba kukholelwa ukuthi lezi zitshalo ziwukhipha imishanguzo emhlabathini futhi ziyikhulule. Kodwa kufanelekile ukutshala nezwe eliyintombi, into esemqoka ukugubha umhlaba. Indawo efanelekayo yomhlaba, "ephumula" okungenani ngonyaka.
I-strawberry Crown, incazelo yalokho kuzo zonke izitolo ezithengisa imbewu nezithombo, ithanda izindawo ezivulekile nezelanga, kodwa kufanele zivikelwe emoyeni. Lokhu kubaluleke kakhulu ukucabangela, kusukela ebusika insimu enjalo izovikelwa kahle ngqongqelo lweqhwa, okudingekayo ukuze izihlahla ze-sitrobheli zidingeke. Uma lokhu kungacatshangelwa, ngonyaka ozayo amajikijolo ayoba amancane.
Tshala le sitrobheli endaweni evulekile ekuqaleni kwentwasahlobo, ekwindla ngasekuqaleni kwehlobo. Hlola ngokucophelela isihlahla ngasinye futhi uqiniseke ukuthi uhlelo lwempande luyathuthuka kahle. Imibhede kufanele ibe mitha eyodwa ububanzi, ibanga eliphakathi kwezihlahla kufanele libe okungenani amasentimitha angu-50, ukuze izitshalo azidideki. Ama-saplings awela emthonjeni, okumele aqale ukuphuziswa kahle. Ukunisela kabusha kuyadingeka ngokushesha emva kokutshala, lapho uhlelo lwempande luzohlanganiswa nomhlaba.
Strawberry Crown idinga ukunakekelwa okuvamile. Kubalulekile ukukhipha ukhula kusistimu ngokuhlelekile. Lo msebenzi ungenziwa lula ngokuhlanganisa i-mulching. Njengengxenye yokumboza, ungasebenzisa i-sawdust, utshani, izinaliti noma amakhadibhodi. Lokhu kuzovikela amajikijolo kusuka kokubola.
Kumele uchithe ama-strawberries njalo, kodwa hhayi kakhulu. Ukuze ama-strawberries akhule kahle futhi akhiqize ngenkuthalo, kufanele ahlanganiswe nama-humus. Ukwenziwa kwamaminerali ngesimo se-nitrogen, i-phosphorus ne-potassium, okuvame ukufakwa emhlabathini entwasahlobo noma ekwindla, ngeke kuphazamise. Ithonya elihle ekuthuthukiseni ama-ash shrubs ash ash, okwenziwa ngaphambi kokumba umhlaba.
Ukuvikeleka ngokumelene nezinambuzane
Isivikelo ezivela ezinambuzaneni yisinye isici esibalulekile ekunakekeleni ama-strawberries. Lawa majikijolo amnandi athandwa kakhulu nezakhamuzi ezinamapulangwe ezindimu zethu, ngakho-ke ngeke kube yinto engafanele endaweni lapho ama-strawberries ekhula khona, asungula isikebhe esithuthumayo. Kusuka kwezinye izinambuzane, isivuno sizosiza ukuvikela izixazululo ezikhethekile zokupuniza. Muva nje, izinambuzane eziwusizo ziye zasetshenziselwa le njongo, okuthiwa yi-entomophages.
Sithemba ukuthi uvuna isivuno esihle seStrawberry Crown. Kodwa kusheshe kakhulu ukuphumula. Ngonyaka ozayo isivuno sasingalungile, kepha kungcono, kubalulekile ukwenza izinqubo ezithile. Gwema izintambo ezisele, zimboze isihlahla ngotshani noma ufafaze ngamapulangwe. Uma kungazelelwe ubona amabala amhlophe emaqabunga, udinga ukuthatha izinyathelo eziphuthumayo. Lokhu kusho ukuthi sitrobheli yakho igule nge-gray gray. Kuzo zonke izitolo ezikhethekile manje uzonikezwa izidakamizwa eziningi ezithinta kalula lokhu "isifo sikatrobheli". Uma ufuna ukondla izihlobo zakho namajikijolo angokwemvelo, sebenzisa amalungiselelo amakhemikhali ngokulandelana nemiyalelo ephaketheni futhi kuphela uma kwenzeka eziphuthumayo.
Ngemva kokufunda isihloko sethu, othile anganquma ukuthi lezi zinhlobonhlobo azikhethi kahle ekunakekeleni, abaningi (ikakhulukazi balimi abangenalwazi) abahambelanga ukuyikhula. Eqinisweni, konke akukwesabeki kakhulu. Umkhuba omncane, isipiliyoni kanye nobunzima ekuboneni kokuqala, ukuxhaphazwa kuzotholakala ngokushesha nangempumelelo.
Strawberry Crown: ukubuyekezwa
Sifunde imibono yabalimi abanolwazi ngalolu hlobo. Futhi yilokho okushiwo isinqumo sabo. Abaningi bakholelwa ukuthi kuhle kubalimi, kodwa akufanele umlimi. Njengoba kwenzeka, kuningi amajikijolo kunzima ukuthutha - ahlanzekile futhi anethenda.
Abalimi bezitshalo basuke bekhangwa kakhulu ngenxa yezifo. Kodwa labo bahlali behlobo abaye bakhula lokhu okuhlukahlukene, bakholelwa ukuthi namuhla kunezinhlobo eziningi ezithengayo.
Kungenzeka ukuhlanganisa: uhlobo lwe Crown elinamakhono aphezulu kanye nokuvuthwa kokuqala abantu basehlobo bacebisa ukuba bakhulise umndeni wabo. Ngokuba abanikazi be-dacha akufanelekile kakhulu.
Inani Igama Kataleya. Umsuka, ithonya on isiphetho nobunjalo
Ukuhlaziywa Technical "Forex" (imakethe). Uyini isifinyezo ukuhlaziywa lobuchwepheshe "Forex"